Qodobbada Wax ka Beddelka Macluumaadka Shirkadda Diiwaangashan
Maqaalka wax-ka-beddelka ayaa looga baahan yahay in la beddelo macluumaadka duuban ee ku saabsan shirkaddaada. Maqaalka waxaa lagu xareeyay xafiiska xoghaynta gobolkaaga, si la mid ah iskudarka. Sababaha aasaasiga ah ee loo fayl garaysto qodobbada wax ka beddelka shirkadaha waa:
Magaca Shirkadda Beddelka
U badal tirada inta saamiyada la oggol yahay
U beddel qiimaha Qiimaha Wadajirka Shirkadaha
Ku darista ama ka saarista Agaasimayaasha, Saraakiisha, Saamilayaasha
Mawduucyada wax ka beddelka ayaa la gudbiyaa oo la diiwaangeliyaa isbeddelada ku saabsan ka-mid-noqoshadaada. Shirkadaha Isku-dhafan ayaa kaa caawin doona diyaarinta iyo soo gudbinta qodobbada wax ka beddelka gobol kasta oo ka mid ah 50.
Mawduucyada Nidaamka Diiwaan-galinta Wax ka-beddelka
Waad u wici kartaa Shirkadaha Isku-xidhka ah oo aad dalban kartaa qodobka adeegga wax ka beddelka oo waaxda sharcigayagu diyaarin doonto dukumintigaaga. Waad u fiirin kartaa oo aad saxeexi kartaa wax ka badalidaada oo, markii la oggolaado, waxaan qodobbada ku xarayn doonnaa xafiiska gobolkaaga Guud ahaan gobollada oo dhan way ku kala duwanaan doonaan waqtiga xereynta, si kastaba ha noqotee, mar haddii la fayl gareeyo diiwaannadaada shirkadda waa in lagu cusboonaysiiyaa wax ka bedelka.
Qodobbada Adeegga Wax-ka-Beddelka
Waxaad bixinaysaa kaliya $ 199 khidmada adeegga iyo khidmadda xareynta gobolkaaga ee nidaamka oo dhan diiwaangelintaada shirkadana waxaa loo badali doonaa hal talaabo oo fudud.